FIKAROHANA GRAFITA : Migoka tombontsoa mivantana ny vahoakan’Ambinaninony
Fahazoan-dalam-pikarohana nivoaka tamin’ny taona 2010 no ahafahan’ny orinasa kanadianina IDN Metals manao asa fikarohana grafita (graphite) ao amin’ny Fokontany Vohitsara Kaominina Ambinaninony Distrikan’i Brickaville Faritra Atsinanana. 8 août 2017
Maharitra enim-bolana izany asa fikarohana izany, nanomboka tamin’ny jolay 2017 hatramin’ny desambra 2017 izao.
Niato kely izany fikarohana izany vokatry ny tsaho naely sy fanakorontanana saim-bahoaka nataon’ny ben’ny tanànan’Ambinaninony iray teo aloha, saingy efa niverina amin’ny laoniny kosa. Tsy resy lahatra tamin’ny fihetsika nataon’ ilay ben’ny tanàna teo aloha mantsy ireo vahoaka ao an-toerana.
Mponina ao amin’ny Fokontany Vohitsara manodidina 1 500 no mahazo tombontsoa mivantana amin’ny fisian’izao asa fikarohana harena an-kibon’ny tany ataon’ny orinasa IDN Metals izao.
Asa fikarohana fa tsy fitrandrahana
Niteraka resa-be tokoa ny fahatongavan’ny orinasa kanadianina tao Vohitsara ity. Fantatra anefa fa nisy fifampiresahan’izy ireo mivantana tamin’ny vahoaka mialoha ny nanombohana ny asa fikarohana ary voahaja ny fomban-tany rehetra. Nandalo tato amiko ireo mpitantana avy amin’ny orinasa IDN Metals ary nisy tokoa ny fivoriana niarahana tamin’ny vahoaka mialoha ny asa rehetra, hoy i Iambana Jean Pierre, Sefo Fokontany Vohitsara.
Taorian’ny fifampiresahana, dia nekenay ny fidiran’izy ireo hanao io asa fikarohana eto aminay io, hoy hatrany ny fanazavany. Sady mikaroka izy ireo no manone asa ireo vahoaka eto an-toerana, raha ny fanazavany hatrany. Nanamafy io voalazan’ny Sefo Fokontany ao Vohitsara io ny ben’ny tanànan’Ambinaninony, Ranaivo Cécilien. Ity farany izay nilaza fa, ny 23 febroary 2017 dia nisy fivoriana niarahana tamin’ny vahoaka Vohitsara manontolo, ny IDN ary ny teo anivon’ny Kaominina, nampahafantarana ny hisian’ilay asa fikarohana sy ireo asa sosialy hotanterahina. Nihaino ireo hetahetam-bahoaka ilay orinasa hanao asa fikarohana ary voarakitra an-
tsoratra izany rehetra izany. Mandainga izay milaza fa niditra an-keriny teto aminay ny IDN Metals, hoy hatrany ny ben’ny tanànan’Ambinaninony.
Nanakiana mafy ny fihetsik’ilay ben’ny tanàna teo aloha ny ben’ny tanàna am-perinasa izay nambarany fa manao sakana amin’ny fampandrosoana. Nisy ny fanaovana fomban-drazana tamin’ny alalan’ny vono omby ho fanajana ny fomban-tany mialoha ny nanombohana ny asa. Nilaza ny fahavitan’io fanajana ny fomban-tany tamin’ny alalan’ny vono omby sy laho joro io ny Vavanjaka ao Vohitsara, Razafindrabe José. Fomba izay natao ny zoma 31 marsa lasa teo.
Manoloana ireo resabe sy tsaho niely fa fitrandrahana grafita no ataon’ny IDN Metals, dia nitondra fanazavana ny Tale iraisam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika Toamasina, Amable André Benjamin. Nolazainy tamin’ny fomba mahitsy fa fahazoan-dalana amin’ny asa fikarohana no nomena ny IDN Metals fa tsy fahazoan-dalana hitrandraka velively. Tsy nivadika amin’izany ity orinasa kanadianina ity fa nanaja antsakany sy andavany izay efa voasoratra ao anatin’ny bokin’andraikitra, hoy hatrany ny fanazavany. Misy ny fanaraha-maso sy fitsirihana akaiky ataon’ny sampandraharaha misahana ny harena an-kibon’ny tany izay midina matetika ao Vohitsara. Voaporofo tokoa fa tsy manao fitrandrahana velively ilay orinasa fa fikarohana no ataony. Tsy mampiasa fitaovana fitrandrahana fa fitaovana fampiasa amin’ny asa fikarohana no ampiasainy.
Roso sahady ireo asa sosialy
Mahazo tombony mivantana amin’ny asa fikarohana ataon’ny IDN Metals ireo mponina ao Vohitsara sy ny manodidina. Anisan’izany ny ao Ambatolampy izay faritra ao anatin’ny Fokontany Vohitsara. Anisany nitondra faisana tamin’ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo ny tany an-toerana. Nisy noho izany ny fitondran’ny IDN Metals fanampiana ho an’ireo vahoaka tao Vohitsara tamin’ny alalan’ny fanolorana vary.
Ankoatra izay dia roso koa ny fanamboarana ny lalana mirefy 4 km mampifandray an’i Vohitsara amin’ny faritra kely Ambatolampy. Misy tetezana iray iampitana ka anisany tafiditra anatin’ny asa fanamboarana izany. Ny faran’ny volana avrily lasa teo no nanomboka ny asa. Lalana izay atao rarivato, ka azon’ny fiara iampitana soa aman-tsara ary manala fahasahiranana amin’ny fivezivezena sy ny famoaham-bokatra. Vohitsara izay tanàna mamokatra.
Ahitana letisia, voasary, mangahazo, akondro, saribao. Ao anatin’ny lisitr’ireo asa sosialin’ity orinasa manao asa fikarohana grafita ao an-toerana izao koa ny fanomezana rano fisotro madio. Samy hahazo izany ny ao Vohitsara sy Ambatolampy. Efa mandeha ihany koa amin’izao fotoana izao ny fanorenana kianja manara-penitra any an-toerana amin’ny nomen’ny vahoaka. Iantohan’ny IDN Metals kosa ny vola sy ny hoenti-manana rehetra amin’ny asa fanorenana. Ny volana sepambra izao no ho vita ny asa.
Amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao, dia hanome kojakojam-pianarana ho an’ny zanaky ny mponina ao an-toerana ny orinasa ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny.
Ankoatra ireo asa sosialy ireo dia mipaka mivantana amin’ny isan-tokantrano ny fisian’ny asa fikarohana grafita ao Vohitsara. Misy ireo miasa mivantana amin’ny fikarohana ireo vahoaka ary misy koa ireo misehatra amin’ny asa fanamboaran-dalana. Ho an’ny asa fanamboaran-dalana dia 8 000 Ariary isan’andro ny karaman’ireo olona 140 ampiasain’ny IDN Metals. Mahalafy ireo mponina ao an-toerana araka izany ny fisian’ny orinasa manao fikarohana izao, izay miteraka asa mivantana ho azy ireo.
Nonerana ireo tompon’ny tany lalovan’ny lalana amboarina
Miisa 24 ireo olona manana voly voakasika amin’ilay asa fanamboaran-dalana mampifandray an’i Vohitsara sy Ambatolampy. Nisy ny fifampiresahana mivantana tamin’ilay orinasa manao fikarohana sy ireo olona 24 ireo. Natao ny tombana ka nonerana avokoa ny tombanim-bidin’ireo voly voakasika.
Ny 21 amin’ny 24 dia efa vita soa aman-tsara ny fandoavan’ny orinasa vola ho azy ireo. Mbola ao anatin’ny fanaovana tombana ny telo ambiny amin’izao fotoana izao ary tsy maintsy handray anjara volany ireo olona telo ireo tsy ho ela, hoy Raymond Borida izay tompon’andraikitry ny fifandraisana amin’ny vahoaka eo anivon’ny IDN Metals. Nandritra ny fidinana ifotony tany an-toerana dia nanamafy ny fahazoana io vola fanonerana avy amin’ny IDN Metals io ny solontenan’ireo olona 24, Richard Auguste. « Voahaja ny fifanarahana natao taminay », hoy hatrany ny solontenan’ny mpahazo tombontsoa.
Hofantarina ny hatsaran’ny grafita eto Vohitsara Nandritra ny fidinana natao tany ifotony hatrany dia nitondra fanazavana Rasangarivony Harifidy Fidèle manam-pahaizana malagasy momba ny tany sy ny toe-tany (géologue) miasa eo anivon’ny IDN Metals. Nilaza ny tenany fa tao anatin’izao fotoana fohy nanaovana ny fikarohana izay, dia hita soritra sahady fa misy grafita ao Vohitsara fa ny kalitaony sy ny fatrany no mbola tsy fantatra. Alefa any ivelany hatao fitiliana ireo singa azo avy ao Vohitsara ary mbola mitohy ny fikarohana, raha ny nambarany hatrany.
Raha nanontaniana mahakasika ny mety ho fitrandrahana na tsia aorian’ny fahavitan’ny fikarohana kosa ity manam-pahaizana miasa eo anivon’ny IDN Metals ity dia nilaza fa mbola tsy izay no mahamaika fa vitaina hatramin’ny farany aloha ny asa fikarohana. Sady tsy mbola nahazo alalana amin’izany fitrandrahana izany rahateo ny IDN Metals, hoy hatrany ny fanazavany. Notsipihiny kosa fa voajaha tanteraka ny tontolo iainana mandritra ny asa fikarohana atao. Ireo toerana akana ranon-tany anaovana andrana dia averinay totofana soa aman-tsara rehefa vita ny atao, hoy hatrany Rasangarivony Harifidy Fidèle. Nomarihiny hatrany fa tsy misy fakana tanin’olona ataon’ny IDN Metals fa fakana nofon-tany anaovana andrana ihany no atao mandritra izao asa fikarohana izao.
Manondrana grafita 10 000t isan-taona ny Malagasy
Araka ny fanazavana noentin’ny Tale iraisam-paritry ny Harena ankibon’ny tany sy ny solika Toamasina, Amable André Benjamin, dia ao anatin’ny faritanin’i Toamasina irery ihany no misy grafita eto Madagasikara. Mahatratra 10 000 taonina isan-taona ny grafita aondran’i Madagasikara mankany ivelany. Misy karazany telo kosa ny kalitaon’ny grafita, ka manodidina ny 400 hatramin’ny 1 000 dolara ny vidin’ny iray taonina. Izany hoe miankina amin’ny kalitaony ny vidiny.
Ny fatran’ny karbona ao anatiny no mamaritra ny kalitaon’ny garafita. I Shina, Etazonia, Inde : ireo no firenena telo tena mpanafatra grafita eto Madagasikara sy tena mpanjifa izany maneran-tany. Hampiasaina amin’ny orinasa maro izy io. Maro ny zavatra ilàna grafita toy ny fanamboarana loko, crayon, … Miisa efatra kosa ireo orinasa mpitrandraka sy mpanondrana grafita eto amintsika, dia ny Power Stand Development , Etablissements Rostaing, Graphmada ary ny Etablissements Gallois.
Ny Etablissement Gallois izay nanomboka nitrandraka grafita malagasy hatramin’ny taona 1900.
Mampitandrina noho ireo salama misy Covid ny talen’ny Fahasalamana FIHENAN’NY MARARY AO MAHAJANGA (1797) 11 mai 2021 ALAKAMISY 6 MAY - ALAROBIA 12 MAY 20121 (738) 10 mai 2021 “Môtô halatra no atakalo rongony mahery vaika” FIDOROHANA TAFAHOATRA (50) 11 mai 2021 Mampisavoritaka ny amboletran’ i Raoul Rabekoto KITRA MALAGASY (47) 11 mai 2021 Tsy ampy 3 000m3 isan’andro ny rano tsinjarain’ny Jirama TANANAN’I MAHAJANGA (37) 11 mai 2021 Tsaboina sy toroana hevitra any an-trano ireo mararin’ny Covid – 19 « COUP DE POING » (36) 11 mai 2021